मेयरको शासन !- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
मेयरको शासन !
जनप्रतिनिधिको यति ठूलो घमन्ड पहिलोपटक सुनियो  । इटहरीका मेयर द्वारिकालाल चौधरीलाई नेकपाको कार्यकर्ता भएकै आडमा यत्रो आत्मबल कसरी बढ्यो ? एउटा पत्रकारले फेसबुकमा स्टाटस लेखेकै आधारमा उनको र पत्रकारको बीचमा मनबुटाब सुरु भएको देखिन्छ  ।
पत्रकारको पनि कमी–कमजोरी होलान्, तर मेयरको तरिका ठिक होइन । एउटा जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्ति नेपालको संविधान र कानुन विपरीत छन् । उनले खुलेआम भनेका छन्, ‘म नेकपाको कार्यकर्ता हुँ, पार्टीले मलाई केही गर्न सक्दैन ।’ पहिलो, जनप्रतिनिधि भइसकेपछि आफूलाई कुनै पार्टी कार्यकर्ता ठान्नु नै गलत हो ।
नेपालमा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरूले राजनीतिक आडमै उन्मुक्ति पाउने गरेको पृष्ठभूमिमा मेयर चौधरीको अभिव्यक्तिले झस्काएको छ । यसले अपराध गर्नेहरूको आत्मबल बढाउँछ । आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने मेयरलाई पार्टीले कस्तो कारबाही गर्छ, हेर्न बाँकी छ । यस्ता जनप्रतिनिधिलाई पनि सरकारले कारबाही गरेन र पदमा राखिराख्यो भने यो देशमा सिधासाधा जनताले सहजै बाँच्ने अधिकार गुमाउँदै जानेछन् । सरकार निरंकुशतातिर अगाडि बढ्दै गएको प्रमाणित हुनेछ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ १०:२०
गाउँ–नगरमा चौडा सडक
जेष्ठ २४, २०७६ गणेश चौधरी
टीकापुर — स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले गाउँ नगर ब्यवस्थित गर्न सडक चौडा बनाउने र बाटोको स्तर सुधारमा जोड दिएका छन् । हाल गाउँका साँघुरा सडक पनि कम्तिमा ३० देखि ४० फिट चौडा बनाउने काम भइरहेको हो ।
टीकापुरलाई राजमार्गसँग जोड्ने वैकल्पिक सडक डुँडेझारी खण्ड कालोपत्रे गरिँदै ।तस्बिर : गणेश/कान्तिपुर
स्थानीयबाटै बाटोघाटो निर्माणको माग आएकाले निर्माण र सुधारमा जोड दिइएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले भने, ‘जनताको सबभन्दा प्रमुख माग बाटोघाटोको स्तर सुधार्ने छ ।’ नक्सामा भएका बाटो पनि मासेर साँघुरा बनाइएकाले नक्शाअनुसार रेखांकन गरी ग्राभेल र कालोपत्रेको काम भइरहेको उनले बताए ।
साँघुरो बाटोले काठमाडौंलगायत पुराना सहर अस्तव्यस्त छन् । त्यस्तो नहोस् भनेर बाटो चौडा पार्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष चौधरीले बताए । यातायात सडक गुरुयोजनाअनुसारको मापदण्डका आधारमा सडक चौडा बनाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरीले पनि गाउँपालिकाको सबै सडकको स्तरोन्नति गर्ने योजना रहेको बताए । करिब ५० प्रतिशत बढी बाटोघाटो निर्माणकै योजना माग भई आएको जोशीपुर गाउँपालिकाले जनाएको छ । त्यहीअनुरूप बजेट पनि बाटोघाटोकै लागि विनियोजन गरिएको छ । टीकापुर नगरपालिकामा पनि सडक चौडा गरी माटो पटानी तथा ग्राभेल र कालोपत्रेको काम भइरहेको छ ।
गाउँबस्तीका साँघुरा सडक चौडा बनाउने र सके कालोपत्रे नभए ग्राभेल गर्ने काम भइरहेको टीकापुर नगरपालिका ८ का वडाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रवक्ता दीर्घ ठकुल्लाले बताए । उनले भने, ‘सडक कम्तीमा २५ फिट चौडा बनाउने योजना छ । त्यसैअनुसार काम सुरु गरेका छौं ।’
टीकापुर नगरपालिकाको बजार व्यवस्थित गर्न ६ लेनको सडक निर्माणको काम पनि आरम्भ गरिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयको लगानीमा जमरा कुलाको पुलदेखि बसपार्कसम्म करिब १४ करोड लगानीमा सडक निर्माण भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणले जनप्रतिनीधिले गरेको काम पनि देखिने र बढदै गएको सवारी चापका कारण आवतजावतमा सहज पनि हुने भएकाले अधिकांश स्थानीय तहले बाटोघाटो निर्माणमै जोड दिएका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ १०:१८